Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): IRI ဦးစီးပြီး တောင်ကြီးမြို့တွင် ထိရောက်သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသင်တန်း ပို့ချ
IRI ဦးစီးပြီး တောင်ကြီးမြို့တွင် ထိရောက်သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသင်တန်း ပို့ချ
ခွန်မေးလို့ (တောင်ကြီး)၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
International Republican Institute (IRI) မှ ဦးစီး၍ ပါတီစနစ်တကျ စုစည်းခြင်းနှင့် ထိရောက်အောင်မြင်သော မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ဆောင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းတရပ်ကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ပြီး တောင်ကြီးမြို့ ချယ်ရီခွင်းတည်းခိုခန်းတွင် ပို့ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် IRI ၏ ညှိနိုင်းရေးတာဝန်ခံ စတိဖ်စီမ (Steve Cima) မှ တာဝန်ယူပို့ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
IRI အဖွဲ့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်တွင် ရုံးချုပ်အဖြစ်အခြေစိုက်ထား၍၊ နိုင်ငံပေါင်း (၆၀) ကျော်တွင် ရုံးခွဲလေးများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် USAID ၏ ရံပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ၂ နှစ်ကျော် ပါတီစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပြီး၊ မကြာမှီ ကာလတွင် ခေါင်းဆောင်မှုပညာ သင်တန်းကို ၃ လ တစ်ကြိမ်ပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ IRI မှ ၀န်ထမ်း ကိုအောင်မျိုးဦး aungmyo@iri.org ထံဆက်သွယ်၍ သင်တန်းလျှောက်လွှာများ တောင်းခံနိုင်ပြီး။ အသက် (၃၅) နှစ်အောက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုပုံစံနည်းပညာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရောက်သည်အထိ ပို့ချသွားမည်ဟု စတိဖ် မှ သင်တန်းတွင် အသိပေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသင်တန်းသို့ဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီများ အနည်းဆုံး (၇) ပါတီမှ သင်တန်းသား အနည်းဆုံး (၁၂၀) ခန့် တက်ရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ညနေ (၄) နာရီအချိန်ခန့်တွင် အဆုံးသတ်ကြောင်း သိရသည်။
That's good for our public. We ought do like this early, but it isn't late yet.
စုပေါင်းကာကွယ်ရန် လက်နက်ကိုင် ၁၂ ဖွဲ့ ကောင်စီဖွဲ့
ဖနိဒါ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ချင်းမိုင် (မဇ္စျိမ) ။ ...
NDF Party to Ally with Pro-democracy, Ethnic Groups
By WAI MOE Friday, May 7, 2010 (The Irrawaddy) A former leader of the National League for Democracy (NLD) who plans to formanew politi...
တောင်ကြီးမြို့တရားရုံးမှ ထူးဆန်းသောအမှုကြီး (အပိုင်...
ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင်နဲ့ လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားများ စဉ်း...
ပအိုဝ်း (PNA) ပြည်သူ့ စစ်မှ တောင်ကြီး-လွိုင်ကော်ေ...
IRI ဦးစီးပြီး တောင်ကြီးမြို့တွင် ထိရောက်သည့် မဲဆွယ...
အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ရွာသူကြီးကိုနှောက်ယှက်မှုနှင့် ...
အိုးစည်ထွင်းဆရာ ပအိုဝ်းရိုးရာအိုးစည် ၂ လုံးလှူဒါန်း
တိုင်းရင်းသားလူငယ်ပေါင်းစုံ စုပေါင်း၍ တောင်ကြီးမြိ...
တောင်ကြီး အေးသာယာကားကြီးကွင်း တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့...
တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ သမ္မတနှင့် အစိုးရလွတ်တော်ရုံ...
ပအိုဝ်းပြည်သူ့ စစ် PNA မှ တောင်ကြီးမြို့ နယ်အတွင်း...
မီးလင်းရေးအတွက် ငွေကြေးကို အဓမ္မခြိမ်းခြောက်ကောက်ခံ
ကျောက်တန်းကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးသတ်မှတ်ငွေကြေး မထည...
ပအိုဝ်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု ပညာသင်နှစ်အ...
လူငယ်များနေ့မှာ ပါဝင်ဖို့ တို့များဖိတ်ခေါ်
သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်၊ ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ...
ပင်လောင်းတွင် အိုအေစစ်လူငယ်မှ ဦးစီး၍ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသ...
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် လူမှုရေးဌာန၏ ဒသတွင်းဖွံ့...